सरकारले जनताको मत जिते पनि मन जित्न सकेनः डा. कोइराला « Farakkon
सरकारले जनताको मत जिते पनि मन जित्न सकेनः डा. कोइराला
दाङ, १२ चैत ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले शहिदहरुको बलिदानबाट भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु सबैको दायित्व भएको बताएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका घोराही उपमहानगरपालिका–१९ सैघाका नेपाली काँग्रेसका नेताहरु माधव रावत र लालबहादुर घर्तीको स्मृतिमा निर्माण गरिएको शालिकको अनावरण गर्दै महामन्त्री कोइरालाले शहिदहरुको बलिदानलाई भुल्न नहुने बताए ।
शहिदको बलिदानीको सम्मान र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने दायित्व सबै राजनीतिक दलहरुको भएको भन्दै महामन्त्री कोइरालाले सहकार्यबाटै समृद्धि सम्भव हुने धारणा राखे । महामन्त्री कोइरालाले नेपालका हरेक परिवर्तनको नेतृत्व काँग्रेसले गरेको जिकिर गर्दै वर्तमान सरकारले जनता मत जिते पनि मन जित्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
महामन्त्री डा. कोइरालाले वर्तमान सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाएर एकलौटी अघि बढ्दै आएको आरोप लगाए । महामन्त्री कोइरालाले सहकार्य र सहमतिबाटै विकास सम्भव हुने भन्दै दम्भले कसैको पनि हित नहुने बताए । जनमतलाई समद्धिसँग जोड्न जनताकै बीचमा जानुपर्ने भन्दै उनले राजनैतिक सहमति पनि खोज्नुपर्ने बताए ।
महामन्त्री कोइरालाले नेपालका हरेक परिवर्तनको नेतृत्व काँग्रेसले गरेको जिकिर गर्दै वर्तमान सरकारले जनता मत जिते पनि मन जित्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
साथै उनले आ–आफ्नो गाउँ ठाउँको विकासमा सशक्त भएर लाग्न र पार्टीलाई एकता बनाउन नेता कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशनसमेत दिए । नेपाली काँगे्रसले सैघाको लाकुरीडाँडामा शहिद रावत र घर्तीको शालिक निर्माण गरेको हो । नेपाली काँग्रेस क्षेत्र नम्बर २ ले निर्माण गरेका शालिक तथा पार्टी कार्यालय निर्माण गरेको हो ।
नेपाली काँग्रेस घोराही १९ का पार्टी सभापति ज्ञानबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा महामन्त्री कोईरालासँगै केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल, दिपक गिरी, गुरु घिमिरे, कल्याण गुरुङ, किशोरसिंह राठौर, सञ्जय गौतमको सहभागिता रहेको थियो । रावत र घर्तीलाई तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले हत्या गरेका थिए ।
यसैबीच नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले आफ्नो पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने अभियानमा रहेको बताए । नेपाल प्रेस युनियन दाङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै रिजालले नेपाली काँग्रेस जनजागरण अभियानमा रहेको बताए । नेपाली काँग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको भन्दै आगामी निर्वाचनमार्फत् पहिलो पार्टी बन्ने अभियानमा रहेको बताए ।